သင်၏ Bullet ဂျာနယ်အတွက် စိတ်ကူးများ - Ikkaro
စတင်ပြုလုပ်ခြင်း >> စာအုပ်များ >> Bullet Journal Ideas
လက်ခံရရှိသောအခါတွင်၊ ၎င်းတွင်ပါရှိသော နမူနာပုံစံများကို မြင်ခဲ့ရပြီး ၎င်းကို ရိုးရိုးမှတ်စုစာအုပ်ထက် ပိုသောအရာတစ်ခုအတွက် အသုံးပြုသည်ဟု ထင်စေခဲ့သည်။ ဒါနဲ့ Youtube မှာ ရှာကြည့်တော့ Bullet Journaling ရဲ့ ကမ္ဘာသစ်တစ်ခုကို ရှာတွေ့ခဲ့တယ်။
ကျွန်တော် စပြီးသုံးနေပြီ။ နောက်ဆုံးတော့ ငါ့အတွက် အဆင်ပြေတယ်။ မဂ္ဂဇင်းများ၊ သတင်းစာများနှင့် ဝဘ်ဆိုဒ်များတွင် ဆောင်းပါးများ မှတ်သားရန်. ၎င်းတို့သည် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော အချက်အလက် သို့မဟုတ် စိတ်ကူးစိတ်သန်းများ၊ မှတ်သားရန် သို့မဟုတ် စုံစမ်းရန်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကို မည်သည့်နေရာ၌မဆို ချရေးခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့ကို အမြဲတမ်း မေ့သွားနိုင်သည်။
လောလောဆယ် အရမ်းပျော်နေတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ဖွဲ့စည်းပုံသည် အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ဆောင်းပါးရဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဘယ်မဂ္ဂဇင်း၊ သတင်းစာ၊ ဘယ်ဝဘ်ဆိုဒ်နဲ့ သက်ဆိုင်ပြီး အတွေးအမြင်တွေကို ချန်ထားခဲ့တယ်။
အနုပညာဆိုတာ လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏မှတ်စုစာအုပ်ကို လှပအောင်ပြုလုပ်ရန် မကြိုးစားသည်မှာ အလွန်အသုံးများသည်။ ကျည်ဆန်ဂျာနယ်ဒါကို ကျည်ဆန်ဂျာနယ်ထုတ်ခြင်းလို့ ကျွန်တော်တကယ်သံသယဖြစ်မိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဆက်ဖတ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့မှတ်စုစာအုပ်တွေနဲ့ ခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့ ဘယ်လောက်ခက်ခဲလဲဆိုတာ သင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
Bullet Journal ဆိုတာ ဘာလဲ။
GTD (Get Things Done) ကဲ့သို့ ကုန်ထုတ်စွမ်းအား နည်းစနစ်တစ်ခုအဖြစ် ယူကြသူများလည်း ရှိပါသည်။ ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ စာအုပ်တွေ၊ သင်ခန်းစာတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေ ရှိတယ်။
အခြားသူများအတွက် Bullet Journal သည် အနုပညာလက်ရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ စိတ်ကူးစိတ်သန်းများ၊ ပြက္ခဒိန်များ၊ အဖြစ်အပျက်များနှင့် မှတ်တမ်းများအားလုံးကို ရေးမှတ်ရန် အသုံးပြုသော်လည်း စာမျက်နှာတစ်ခုစီကို အရောင်များ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ ရေဆေးများဖြင့် လွှမ်းမိုးခြင်းဖြင့် အနုပညာနည်းလမ်းဖြင့် ပြုလုပ်ကြသည်။ ဝါရှင်တန် တိပ်ခွေ စသည်တို့ စွမ်းအင်ဖြုန်းတီးမှု။
တခြားဟာတွေက ပိုလက်တွေ့ကျပြီး ဒီနေရာကို ကျွန်တော်ဝင်ရတော့မယ်။
Bullet Journal နဲ့ ဘာလုပ်နိုင်မလဲ။
နေ့စဉ် လစဉ်၊ အပတ်စဉ်၊ နေ့စဉ်
ဖတ်ရန်၊ ဖတ်ရန်၊ ဝယ်ရန်စာအုပ်များစာရင်းများ၊ စီးရီးများ၊ ရုပ်ရှင်များ၊ စသည်တို့။
အဆုံးတွင်၊ သင်၏အလုပ်များ၊ အသုံးစရိတ်များစသည်တို့ကို စုစည်းရန် သို့မဟုတ် စိတ်ကူးစိတ်သန်းများ၊ မှတ်စုများ၊ တီထွင်မှုများ သို့မဟုတ် စိတ်ထဲပေါ်လာသမျှကို စုစည်းပြီး အရောင်အသွေးစုံလင်သောနည်းလမ်းဖြင့် ထားရှိရန် မှတ်စုစာအုပ်များထားရှိခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။
သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လူများဘာလုပ်ကြပြီး အကြံဥာဏ်များရယူကြသည်ကို ကြည့်ရှုရန် အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါသည်။ ဥပမာ၊ မှတ်စုစာအုပ်မှာ စာမရေးခင် အလေ့အကျင့်ကောင်းတစ်ခုက သင်ရေးဖို့အသုံးပြုမယ့် အကြောင်းအရာကို စမ်းသပ်ဖို့ပါပဲ။ အထူးသဖြင့် ၎င်းသည် စာရွက်ဖြတ်သွားခြင်းရှိမရှိ ကြည့်ရှုရန်၊ ၎င်းသည် အလွန်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သည့်အပြင် မှင်များ လည်ပတ်နေပါက၊ မည်သို့မည်ပုံ၊ စသည်ဖြင့်၊
Notebooks နှင့် Bullet Journaling အမျိုးအစားများ
ကျွန်ုပ်အတွက် အမျိုးအစား ခွဲခြားမှုများသည် အလွန်အရေးမကြီးပါ၊ သာမန်အရာမှာ စတိုင်များ ရောနှောခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် သီးခြားအမျိုးအစားနှင့် မသက်ဆိုင်ကြောင်း နားလည်ပြီး လူများစွာသည် ၎င်းတို့၏ သတင်းစာကို အမျိုးအစားတစ်ခုအဖြစ် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် လေဖြတ်သွားကြသည်။
အနုပညာဂျာနယ်. ၎င်းတို့သည် များသောအားဖြင့် မှတ်စုစာအုပ်များဖြစ်ပြီး၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင် အလျားလိုက်နှင့် အလွတ်များဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် နေ့စဉ်ရေးဆွဲရန် အသုံးပြုသည့် အမှတ်များ မပါရှိပါ။
နေ့စဉ်ဂျာနယ်. တစ်သက်လုံး ဒိုင်ယာရီလေး ရေးထားပေမယ့် များသောအားဖြင့် အရမ်းလှတယ်။
ခရီးသွားဂျာနယ်. ဤအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်၊ ပြင်ဆင်ရန်မှတ်စုစာအုပ်၊ ခရီးစဉ်များကိုခြေရာခံ၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ခရီးစဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ခဲ့သမျှကိုမှတ်မိရန်ဤသည်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ကောင်းကောင်းမသိ၊ ဒါမှမဟုတ် နားမလည်တာတွေ၊ Doodle Journal၊ Minimalist Journal၊ Daily planner and tracker journal၊ Morning journal၊ Evening journal စသဖြင့် စသဖြင့်ပေါ့။
အမြဲလိုလို၊ သင်ပေးမည့်အသုံးပြုမှုပေါ်တွင်မူတည်သော်လည်း သင်စဉ်းစားသင့်သည့်အချက်အချို့ရှိပါသည်။
A5 သည် ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ အဲဒီအခါမှာ မင်းအမြဲတမ်း ဆောင်ထားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အသေးအမွှားလေးတွေကို စိတ်ဝင်စားလာနိုင်ပါတယ်။ ရှုခင်းမှတ်စုစာအုပ်သည် ဤအတွက် ပို၍စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောကြောင့် ပန်းချီဂျာနယ်တစ်ခုပြုလုပ်လိုပါက အရွယ်အစားကိုလည်း ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
Bullet Journal မှာ သာမာန်အချက်က အစက်ချ၊ လာပါ၊ တင်းကျပ်တဲ့ စည်းမျဉ်းတစ်ခုတော့ မဟုတ်ဘူး၊ ကျွန်တော်ပြောသလို ဒါက နည်းစနစ်တစ်ခုနီးပါးဖြစ်ပြီး အနုပညာဂျာနယ် ထုတ်ဝေတော့မယ်ဆိုရင် စာမျက်နှာအလွတ်ဖြစ်စေချင်ရင်၊ ပြီးမှ သွားပါ။
Ottergami ဖြစ်သည့် ဓာတ်ပုံများတွင် ကျွန်ုပ်ချန်ထားခဲ့သည်မှာ 150GSM ဖြစ်ပြီး၊ လုံလောက်သောအထူဖြစ်ပြီး၊ ဖြတ်မသွားသော Stabilo အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး Staedler အမြဲတမ်းပင် လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
ရေဆေး၊ အမှတ်အသား စသည်တို့ဖြင့် ခြယ်သမည်ဆိုပါက grammage ကို အာရုံစိုက်ရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
vBulletin တွင် အသုံးပြုသူတစ်ဦးမှ စာများအားလုံးကို ဖျက်နည်း
2 Bullet Journal ဆိုတာ ဘာလဲ။
3 Bullet Journal နဲ့ ဘာလုပ်နိုင်မလဲ။
4 Notebooks နှင့် Bullet Journaling အမျိုးအစားများ
5 ကျည်ဆန်ဂျာနယ်ဝယ်တဲ့အခါ ဘာရှာရမလဲ